सोल्टीमा सकियो ओलीको राष्ट्रवाद ! सुष्माको अगाडि सरी भनेपछि नाकाबन्दीलाई भुल्‍ने सहमति — OnlineDabali
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले नेपालमा लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका थिए । संविधानप्रति असहमति जनाउँदै मधेसी दलका नेताहरु नाकामा पुगेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मधेसी दललाई सहयोग गर्दै अघोषित नाकाबन्दी गरेका थिए ।
नाकाबन्दी लगाउने भारतको कदमको अगाडि ओली नझुकेपछि सबैले हाइ हाइ गरेका थिए । नाकाबन्दीले महाकाली बेचेर ओलीले भारतको सेवा गरेको घटनालाई भुलाइ दिएको थियो । नाकाबन्दीभन्दा पहिले एमाले अध्‍यक्ष मात्रै भएका ओलीले त्यसपछि राष्ट्रवादी नेताको रुप ग्रहण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री हुँदासम्म ओलीले भारतसँग भन्दा पनि चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए ।
नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री हुने तयारीमा रहेका ओलीले भारतीय विदेशमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् । केही दिन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग फोन वार्ता भएको थियो । मोदीको विशेष दूतको रुपमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज बिहीबार दुई दिने भ्रमणको क्रममा काठमाडौं पुगेकी छन् । उनले पहिलो भेट ओलीलाई नै गरेकी छन् ।
होटल सोल्टीमा ओली र स्वराजबीच पौने घण्टाबढी गोप्य वार्ता भएको छ । साँझ ६ः ४५ बजेबाट गोप्यवार्ता सुरु भएको थियो । वान टु वान वार्तापछि एमाले नेताहरु र भारतीय प्रतिनिधि मण्डलबीच कुरा भएको थियो ।
दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि बिहीबार दिउँसो ४ बजे विशेष विमानबाट काठमाडौं ओर्लिएकी स्वराजले पहिलो राजनीति भेट ओलीबाट सुरु गरेकी हुन्। ओली र स्वराजबीच एमाले-माओवादी पार्टी एकता र नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल भएकाे स्राेतले बताएकाे छ ।
एमालेले उनको सम्मानमा सोल्टी होटलमा रात्रीभोजको आयोजना गरेको छ। एमालेको रात्रीभोजपछि मधेसकेन्द्रीत दुई दल राजपा र फोरमका नेताहरु पनि स्वराजलाई भेट्न सोल्टी होटल पुगेका छन्। ओलीले नाकाबन्दीको क्रममा अाफ्नो अभिव्यक्तिबाट भारतलाई परेको असरप्रति सरी भनेको बताइएको छ ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षिय एक नेताको दाबीअनुसार सोल्टीको भेटवार्तासँगै ओलीले सरी भनेका हुन् । उनले भारतसँग नयाँ सरकार मिलेर अगाडि बढ्न तयार भएको समेत बताएका छन् । यो भेटवार्तासँगै ओलीको राष्ट्रवाद पनि सकिएको छ । अब ओलीले नाकाबन्द भन्दा पहिलोको अवस्थामा पुगेका छन् ।केही राजनीतिक विश्लेषकहरु ओलीलाई भारतीय पूरानो संस्थापनको साथ भएकोले मात्रै नाकाबन्दीमा नझुकेको बताएका थिए । उनीहरुले मोदी सरकारलाई असहयोग गरिरहेको गुप्तचर निकाय ‘रअ’ले ओलीलाई साथ दिएको दाबी गरेका थिए । अाजको वार्तासम्म पाउँदा उक्‍त कुरालाई पुष्ट गर्न बल पुगेको छ ।
यसअघि माके अध्यक्ष प्रचण्डसहितको छलफलमा ओलीले स्वराजलाई अाफूले बोलाएको बताएका थिए । स्वराजको यो भ्रमणलाई महत्वको साथ हेरिएको छ । भोलि स्वराजले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माकेका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट्ने कार्यक्रम छ ।
नेकपाल एमालेले स्वराजको भ्रमणबाट खुशी हुँदै भव्य सम्मान गरेको छ । एमालेले रात्री भोजको अायोजना समेत गरेको छ । सरकार गठन हुनुभन्दा पहिले भएको भेटले ओलीले फेरि नदी-नाला बेच्न सक्ने अाशंका बढेको छ ।
बालकृष्णलाई भेटेपछि बाबुरामले भने-जनयुद्धको फल खाने तर बालकृष्णलाई बालेर आगो ताप्ने ?
समाजसेवी कठायतद्वारा कालिकाेटमा स्वास्थ्य शिविर